मजदुर सुरक्षाको कमजोर अवस्था | Naya Yougbodh National Daily Free songs
Home / सम्पादकीय / मजदुर सुरक्षाको कमजोर अवस्था
मजदुर सुरक्षाको कमजोर अवस्था
Posted by: युगबोध in सम्पादकीय July 8, 2018	0 67 Views
अस् ित मात्रै मुस्ताङमा एउटा हृदयविदारक घटना भएको छ । विभिन्न जिल्लाका मजदूर चढे को टिप्पर दुर्घटना हुँदा २० जनाको ज्यान गएको छ भने के ही घाइते छन् । ज्यान गुमाउने मा दशजना रो ल्पा र पाँचजना दाङका रहे का छन् । जीविका धान्नका लागि मजदूरी गर्न हिमालपारिको जिल्ला पुगे को बे ला यति ठूलो संख्यामा मजदूरको ज्यान गएको छ । सम्बन्धित परिवार र जिल्लालाई मात्र हो इन मुलुकलाई शो काकूल बनाएको छ । धनपै सा कमाएर परिवारको गजोर् टार्न त्यति टाढा पुगे का मजदूर आफै जीवित फर्कन सके नन् । यसबाट उनीहरुको परिवारमा पर्नजाने क्षतिले लामो समयसम्म पनि असर गरिरहने छ । तत्कालका लागि क्षतिको असर न्यून गर्न परिवारको समस् या टानेर् गरी राहतको व्यवस् था गर्नु जरुरी छ । साथै घाइते को शीघ्र उपचार गरी उनीहरुलाई पनि राहतसहित घरपरिवारमा पठाउनतिर सरकारले ध्यान दिनु जरुरी छ ।
मुस् ताङ दुर्घटनालाई धे रै को णबाट विश्ले षण गर्न जरुरी छ । पहिलो कुरा त आफ्नै गाउँठाउँमा रो जगारीको व्यवस् था भएको भए टाढा गएर मजदूरी गर्नुपनेर् बाध्यता हुने थिएन । दो स्रो कुरा, निर्माण कम्पनीहरुले मजदूरको मानवीय मूल्यबो ध नै गदैर् नन् । त्यसो गथेर् भने मजदूरको आवागमनका लागि एउटा टिप्पर प्रयो ग गनेर् थिएनन् । ३५ जना मजदूरलाई एउटै टिप्परमा राखे र आवतजावत गराउनु के मानवीय ब्यवहार हो ? त्यसो नगरे को भए यति ठूलो दुर्घटना नै हुने थिएन । अन्य दे शमा वासस् थानदे खि निर्माणस् थलसम्म जान मजदूरका लागि मानिस बस् न मिल्ने गाडीको व्यवस् था गरिएको हुन्छ तर यहाँ टिप्पर, ट्रक र ट्याक्टरमा चढाएर मजदूरलाई जनावरजस् तै ओ सारपसार गनेर् गरिएको दे खिन्छ । आगामी दिनमा यसमा सुधार ल्याउन सरकारले कस् तो कदम चाल्छ, यो दुर्घटनाबाट सिक्नुपनेर् यो एउटा शिक्षा हो  । एउटा टिप्परमा ३५ जना मजदूर राखे र एक ठाउँबाट अकोर् ठाउँमा लै जानु अपराध नै हो , यस्ता कार्यमा संलग्न निर्माण कम्पनीमाथि कारवाही हुनुपर्छ ।
मजदूरको सवालमा उठाउनै पनेर् सबै भन्दा महत्वपूर्ण विषय हो – सामाजिक सुरक्षा । घटना दुर्घटनामा मजदूरको मृत्यु हुन्छ तर उसको आश्रित परिवारले बिमा पाउँदै न । घाइते हुन्छन्, उनीहरुको सहज र निःशुल्क उपचारको ब्यवस् था हुँदै न । मजदूर घाइते अपांग हुन्छ तर उसले बाँकी जीवन धान्न कुनै पे न्सन वा बिमा पाउँदै न । यसरी हे र्दा मजदूरको सामाजिक सुरक्षाको अवस् था निकै कमजो र छ । यसमा सरकारले न आफै के ही गरे को छ, न निर्माण कम्पनीलाई त्यसका लागि बाध्य बनाउन सके को छ । निर्माण कम्पनीले एउटा डो जर वा टिप्पर किन्दा बिमा गरे का हुन्छन् तर सयौ ं मजदूर परिचालन गर्न उनीहरुको जीवन बिमा गर्नुपदैर् न ? राज्यले उद्यो गधन्दा स् थापना हुने ठाउँसम्म सहज बाटो , बत्ती र फो न पु¥याउन बजे ट लगानी गर्छ तर ती उद्यो गमा काम गनेर् मजदूरको सामाजिक सुरक्षालाई अनिवार्य र बाध्यकारी बनाउन सके को छै न । के अब पनि यसरी नै चल्नसक्छ, समाजवादउन्मुख अर्थतन्त्र ?
अहिले अधिकांश मजदूर अनौ पचारिक क्षे त्रमा नै काम गर्छन् । एकातिर उनीहरुको पारिश्रमिक सुनिश्चित छै न भने अकोर् तिर भौ तिक सुरक्षा, बिरामी हुँदा औ षधिउपचार गने र् अवस् था, छो राछो रीको शिक्षादीक्षा र काम गर्न नसक्ने अवस् था भएपछि उनीहरुको जीवन सुरक्षाको सवाल निकै गम्भीर र संवे दनशील सवालको रुपमा रहे को छ । यसलाई सम्बो धन गर्न भने र नै संविधानले मजदूरको सामाजिक सुरक्षाको सवाल सम्बो धन गरे को छ । तर सरकारले आवश्यक कानून बनाएर यसलाई लागु गनेर् तर्फ अझै काम गर्न सके को छै न । मजदूरको भौ तिक र सामाजिक सुरक्षाबिना जतिसुकै लगानी बढाए पनि, जस् तासुकै विकास यो जना सञ्चालन गरे पनि त्यसबाट जनताले सो चे जस्तो परिवर्तन हुने छै न । आधारभूत तहका जनताले यसबाट राहत महसुस गनेर् छै नन् । त्यसै ले पनि यस् ता हृदयविदारक घटनासँगै यस् ता विषयमा पनि बहस के न्द्रित गर्नु जरुरी छ ।
Previous: नेपाल–चीन रेलमार्ग समृद्धिको पूर्वाधार
Next: पूर्वराजाले मनाए जन्म दिन